Reuzel - Surf Tonic (Sea Salt Spray) | The Myanmar Gentlemen Supplies
Value-Savers & Combos
How To Choose Your Hair Product
Home › New Arrivals › Reuzel - Surf Tonic (Sea Salt Spray) 355ml
Reuzel - Surf Tonic (Sea Salt Spray) 355ml
Regular price MMK 38,000
Default Title - MMK 38,000 MMK
Holland's Finest Pomade
အမျိုးအစား: စွယ်စုံသုံး အောက်ခံပုံသွင်း Sea Salt Spray အရည်
--High Volume | Matte Finish | Adds Extra Hold Sea Salt Spray--
(ဆံသားအစိုဓာတ်ရရှိစေရန် Reuzel - Grooming Tonic ကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပြီး၊ ဆံပင်အရောင်တောက်စေမှုနှင့် ဆံသား၊ ဦးရေပြားအဆီပြန်မှုကို လျော့နည်းစေလိုပါက Reuzel - Surf Tonic ကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်)
သင့်ကိုကမ်းခြေသို့ရောက်နေသော မင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမည့် စွယ်စုံသုံး Sea Salt Spray အရည်...
ဆံပင်အရောင်တောက်စေမှုကိုလျှော့ချပေး၍ အားစိုက်ထုတ်ထားခြင်းမရှိသလို သဘာဝကျကျ Natural Matte Finish ဆံပင်ပုံစံများရစေပြီး၊ ခေါင်းလိမ်းဆီတို့၏ ထိန်းအားနှင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ဆံပင်ပုံစံရရှိစေမည့် တိတိကျကျ ပုံသွင်းစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးကာ၊ ဆံပင်ပုံစံကိုထူထူထဲထဲနှင့် တာရှည်ခံစေလိုသူမိတ်ဆွေတို့အတွက်...
Reuzel - Surf Tonic သည် Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားသော စွယ်စုံသုံး Sea Salt Spray အရည်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်အတွက်အကျိုးရှိသောအဆီများနှင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး သင့်နေ့စဉ်ခန့်ညားမှုအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်အကျိုးပြုပါသည်။
Pre-styler အဖြစ်ကော တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်ပါအသုံးပြုနိုင်ကာ ဆံပင်အရောင်တောက်စေမှုကိုလျှော့ချပေး၍ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် ထူထူထဲထဲပုံစံများပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ဆံပင်ထူသူများအတွက် Matte Finish ကို ခြောက်ကပ်ခြင်းများမရှိပဲ ရစေနိုင်မည့် Gentlemen တိုင်းအတွက် ရှိထားသင့်သော နေ့စဉ်အသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Natural Sea Salt ရဲ့ အဆီစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကြောင့်လည်း ဦးရေပြားအဆီထွက်တတ်သူများအတွက် အဆီပြန်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
Pre-styler အဖြစ် ခေါင်းလိမ်းဆီမလိမ်းခင် လိမ်းပေးပါ။ သို့မဟုတ် ခေါင်းလျှော်ပြီးခါစ ရေအနည်းငယ်စိုနေသောဆံပင်တွင် အောက်ခံလိမ်းပေးပြီး၊ Blowdry လေမှုတ်အခြောက်ခံပုံသွင်းပေးခြင်းဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ဆံပင်ပုံစံများကို ပို၍တိတိကျကျပုံသွင်းစေနိုင်ပြီး၊ ဆံပင်ကို အလွန်အမင်းတောက်ပစေခြင်းမရှိပဲ၊ သဘာဝကျကျ Natural Matte Finish ဖြင့်ပုံကျစေပါသည်။ သင့်ဆံသားမပျက်စီးစေရန် အပူဒဏ်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
သင့်စိတ်ကြိုက်ခေါင်းလိမ်းဆီကို အပြီးသပ်လိမ်းပေးပြီး ပုံသွင်းပေးခြင်းဖြင့် သဘာဝကျကျ Natural Matte Finish ဖြင့် Volume နှင့် Texture မြင့်မားပြီး ထိန်းအားအလွန်ကောင်းသော သင့်စိတ်တိုင်းကျ ဆံပင်ပုံစံကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်မျိုးထဲသီးသန့်အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် သဘာဝဆန်ဆန် Light Hold Control ရှိပြီး အားစိုက်ထုတ်ထားခြင်းမရှိသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆံပင်ပုံစံကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းလိမ်းဆီလိမ်းပြီးဆံပင်ကို ခေါင်းပြန်လျှော်လိုခြင်းမရှိပါကလည်း Reuzel - Surf Tonic အရည်ကို အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ပုံစံကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပုံသွင်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာကြာအသုံးခံမည့် 355ml ဘူးကြီး ပမာဏပါဝင်ပြီး၊ ရနံ့ပါရှိခြင်းမရှိပဲ သင့်တာရှည်ခံမည့်ဆံပင်ပုံစံအတွက် စွယ်စုံသုံး အောက်ခံပုံသွင်း Sea Salt Spray အရည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံပင်အရောင်တောက်စေမှုနှင့် ဆံသား၊ ဦးရေပြားအဆီပြန်မှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
ခေါင်းလိမ်းဆီများ၏ ထိန်းအား Hold ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဆံသားမပျက်စီးစေရန် အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
ကြာကြာအသုံးခံမည့် 355ml ဘူး size
(Choose Reuzel - Grooming Tonic to add moisture and slickness to your hair and choose Reuzel - Surf Tonic to reduce oil from your hair)
Reuzel - Surf Tonic givesaman's style instant volume and texture. This spray adds grip to provide you withasuperior styling ability and letting you createawindblown style withamessy, matte finish. Use it solo or alongside virtually any Reuzel pomade to add lift.
Work through towel-dried or dry hair. For best results, spray the product from the middle of your hair shaft to ends. For added texture, spray into your palms and run them through dry hair. If you want to blow dry, go right ahead. Surf Tonic Spray can also addakick to virtually any other Reuzel product.
Provides Natural Matte Finish
Adds Extra Hold
Gives High Volume and Texture
Providesabetter styling capability
Formulated for thermal styling
Heat-Protecting & Nourishing Natural Extracts
Works great for all hair types
No Extra Fragrance Added
Long lasting 355ml size
The Myanmar Gentlemen Supplies
Myanmar's First Men's Grooming Webstore
Reuzel - Matte Texture Powder
Regular price MMK 34,000
Suavecito x Johnny Cupcakes - Firme Hold Limited Edition Pomade (Original Cupcake Scent)
Regular price MMK 32,000
Suavecito x Johnny Cupcakes - Firme Hold Limited Edition Pomade (Orange & Cream Cupcake Scent)
Reuzel - Hair Tonic
From MMK 38,000
Read | Learn
Grooming | Fashion | Lifestyle Blogs
Copyright © 2021, The Myanmar Gentlemen Supplies.